“Ka’umsa dubbii mooraa Ardaayitaatti WBOfi poolisoota Oromiyaa gidduutti uumame kan harraa. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideos“Ka’umsa dubbii mooraa Ardaayitaatti WBOfi poolisoota Oromiyaa gidduutti uumame kan harraa.
Update: Gaaffiin kun gaaffii qajeelaa dha! WBOn hidhamaa miti!
“WBOn ofumaa wardiyaa bahaa jiran. Qabaa ijoollees itti hin barre. OPDO itti isaan jijjiiruu tattaafatan. ABOn waggaa meeqa barsiise amansiisuu dadhaban; siyaasaan. Shakkanii ramaduu didan. Mooraa akka hin baane dhorkan. WBOn nuti hidhamaa mitii diddaa kaasan. Amansiisuu dadhabanii boombii aaraan itti deeman.”
Jalqaba guyyoota darban kana wayita maatii WBO dubbisuu deemuu ni dhorkan. Uummatallee irraa ittisan akka hin dubbifne. Erga uummata irraa ittisanii WBOn akka deemee maatiifi uummata dubbisu gaafate. Ni dhorkaman. Harra gaaffii WBO sana irratti hudaa’uun mormanii dhukaasa itti banan. Kan rasaasaan madaa’ee kan aaraan gaggabe.
Waraanni mootummaa yommuu WBOtti dhaadatu “Isa waraanni keessan lixa Oromiyaatti waraana keenya gochaa jiru nutimmoo isinirratti agarsiifna” jedhanii dubbii itti jalqaban.”
Oduu Cabsaa: Mootummaan Lammaa Magarsaa WBO mooraa Ardaayitaa jiran irratti waraana labse. Tarkaanfii har’a humni mootummaa Lammaa Magarsaa fudhateen miseensoti WBO lama lubbuun darbeera; sadii immoo madaa’uun beekameera.
Ummanni Oromoo ilmaan isaanii ittisuuf birmachuu qaban!!
Wanti mooraa leenjii Ardaaytaatti ta’e jedhamu maal akka tahe mootummaan ummataaf ibsuu qaba. Odeessi jiru qabatamaatti maali akka tahe ummata beeksisuuf dirqama qabdan bahadhaa. Miseensonni WBO hidhannoo tokko malee Eertiraa irraa seenan mooraa kana keessatti leenjiirra jiraachuu beeyna. Rakkoon dhalatee dhukaasa bansiise maal akka tahe yoo qaama mootummaatiin dafee hin ibsamne olola wal dura nu dhaabuuf karaa banuu danda’a. Dhimmichi dhimma bakka biraatiin kan wal qabatu yoo tahe akkamitti? Maaltu maal tahe? Akkam tahuu qaba ture? Furmaanni hoo?…. Qaama dhimmi laalu irraa ibsa barbaanna.
“Diinni ni riphe malee hin kufne. Dukkanatti nu deebisuuf yaaliin godhamaa jiru baldha! Ammaan booda jilbiiffatuun nuuf salphina! Aggaammii kallattii kamirraayyuu dhufu qolannee Oromiyaa qofaaf otoo hin taane biyyaaf wabii ta’uuf humna jabaa akka sibiilaa ijaarratuu barbaachisa! Eebbi hardhaa qaama deemsa kanaati! Dimokiraasiin lallabuu qofaan hin dhufu! Bakka irree barbaachisutti humna jabaa roorroo ittisu qabaatuu gaafata.”
Prezdaantii MNO Lammaa Magarsaa
Tokkomnaan ni dhaabbanna
Gargar baanaan ni kufna